अवको राजनिति निकाश ओली सरकारको अन्त्य « Bikas Times
अवको राजनिति निकाश ओली सरकारको अन्त्य
देश यतिबेला नियोजित संकटको दुश्चक्रमा छ । यसका बहुआयामिक सम्भावनाहरू देखिन्छन् । नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् कार्यकारीद्वारा गरिएको विधिको नग्न उपहासपश्चात्को राजनीतिक अन्योल सायद यो पहिलो हो । एउटा जननिर्वाचित सरकारको प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गर्नु त परको कुरा, सोच्न सम्म पनि सक्तैन । तर घोर बिडम्वना नैं मान्नुपर्छ कि नेपाल अहिले यही कामको दुष्चक्रमा फसेको छ ।
नेपालको कुभलो चाहने देशीविदेशी तत्वहरू यहाँको राजनीतिक गञ्जागोलबाट रमाइरहेका छन् । अझ आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन् । बल्लतल्ल देशमा राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बन्दै गयो भनेर आश्वस्त हुन थालेका नेपाली जनता साँच्चै आहत भएका छन् । नयाँ पुस्ता चरम निराशामा डुबेको छ र देशको राजनीति सुध्रेला र देश फर्किएर जानेको र सकेको उद्यम् र दुःखजिलो गरौंला भनेर दिन गनिरहेका परदेशी नेपालीहरू थप निराश भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कामलाई अदालतले सच्याई त दिएको छ तर तत्पश्चात विकसित हुनुपर्ने राजनीति जहाँको तहीँ अड्केर बसेको छ । ओली सरकारको बिदाइमा अस्वाभाविक ढिलाइले नयाँ षड्यन्त्रको आभास हुँदैछ ।
आखिर किन यस्तो भयो ? र घरिघरि किन यस्तै हुन्छ त ? नेपालको राजनीतिले किन सही दिशा समात्न सकेन ? आजको मुख्य बहस नैं यही हो । लोकतन्त्र विश्वव्यापी प्रयोगबाट सिद्ध भएको उन्नत राजनीतिक प्रणाली हो । यसको गतिलो र भरपर्दो अर्को विकल्प छैन । फेरि यसको मौलिक विशेषता के हो भने यसका खराबीहरू तत्कालै थाहा पाइन्छ र सतहमा आइहाल्छन् । कसैले लुकाउन वा ढाकछोप गर्न सक्तैन ।
अधिनायकवाद र लोकतान्त्रिक शासनमा हुने आधारभूत अन्तर हो यो । निरंकुश सत्ताले आफ्ना कमजोरी र बदमासीलाई वर्षौं लुकाउँछ र दबाउँछ । यो सबै कालान्तरमा विस्फोट हुनपुग्छ । समाज तथा देशले अनेक थरी दुःख पाउँछ । संसारमा यसका अनेकानेक दुष्टान्त छन् । राज्य र समाजको विकास क्रममा मानव सभ्यताले यस्ता अनेकौं प्रताडना झलेको छ । यसको चर्चा सम्बन्धित प्रसंगमा गरिने छ । आजको सन्दर्भ भने प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन, पुनस्र्थापित संसद् र वर्तमान राजनीति हो ।देशान्तरबाट